Ngizwe Mchunu – The Ulwazi Programme
UNgizwe Mchunu “Azikhale”
Zonke izinkampani ezinkulu zinesisho ezihluke kwezinye ngisho ezaphesheya impela ezifana nesitolo sezimpahla uNike wona owaziwa ngo “Just do it”. Kubukeka engathi noNgizwe Mchunu ungene ngengalo nomkhono kulesisho esithi “azikhale”. Kuthiwa ungene nezicabha emahhovisi enkampani yakwa MultiChoice efuna izimpendulo zokuthi ubani obanike imvumo yokuthi basebenzise lesisho esithi azikhale. Noma kuyigama elijwayelekile ukuthi azikhale kepha uMacingwane ulenze … Read more
Categories People Tags Ngizwe Mchunu
Wathi “Azikhale!”, zamkhalela uNgizwe Mchunu. Wajika ezikhindini ngebheyili owayengumsakazi woKhozi Fm, esakaza uhlelo lukaMaskandi uSigiya Ngengoma. Zamkhalela ngemuva kwesikhashana kube nezinsolo zokuthi ufunwa abakwasidlodlo ngonkulumo yakhe eyaythi “Azikhale!” eyayinxenxa ukuthi kukhululwe owengumongameli uMnumnzane Jacob Zuma. UNgizwe wazinikela kwabomthetho ngemuva kokufunwa ngamaphoyisa mayelana nokugqugquzela udlame emphakathini. Kuzokhumbuleka ukuthi uMacingwane ungomunye wabantu abebehamba phambili ekulweleni ukuthi kukhululwe … Read more